သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ ICLOUD ရဖို့ကိုဘယ်လို - IOS နှင့် MACOS - 2019
သငျသညျကို Windows 10 နှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ထံမှ iCloud အတွက်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါက -7သို့မဟုတ်အခြား operating system ကို, သင်ခြေလှမ်းများကဒီလက်စွဲစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မလိုအပ်စေခြင်းငှါအဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း ဥပမာ, သင်၏ Windows ကွန်ပျူတာကို iCloud ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုကူးယူကွန်ပျူတာကနေမှတ်စုများ, သတိပေးချက်များနှင့်ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါလိမ့်နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်မှ - တစ်ဦးပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူ iPhone ကိုတွေ့ပါရန်။ Android နဲ့ PC မှာ iCloud မေးလ်: သင်, ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤတစ်ခုတည်းပစ္စည်း iCloud မေးလ်ထူထောင်ချင်လျှင်။
icloud.com ayklaud အတွက် Log
တကယ်တော့ (ထို browser ကို မှလွဲ. ) ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာမဆိုအပိုဆောင်း software ကို install လုပ်မလိုအပ်ပါဘူး, နဲ့ Windows, ဒါပေမယ့်လည်း Linux ကိုအတူ PC များနှင့် laptop ပေါ်မသာအလုပ်လုပ်ကြောင်းအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း, MacOS နှင့်အခြား operating system မြားပျေါတှငျ, ဤနည်းလမ်း သငျသညျကွန်ပျူတာနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ခေတ်မီတီဗီနှင့်အတူမသာ ayklaud လော့ဂ်နိုင်ပါတယ်။
ရုံ, ထိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် icloud.com ကိုသွားသင့်ရဲ့သင့်ရဲ့ Apple ID များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်ကို web interface ကိုအတွက် iCloud အီးမေးလ်လက်လှမ်းအပါအဝင်သင့်အကောင့်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာ, ဝင်ရောက်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ ayklaud ဝင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်, iCloud Drive ကို, မှတ်စု, ပြက္ခဒိန်များနှင့်သတိပေးချက်များရဲ့ contents အဖြစ် Apple ရဲ့ ID ကိုဆက်တင်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ iPhone (အတူတူပင်အပိုဒ်ထွက်သယ်ဆောင်အိုင်ပက်နဲ့ Mac ရှာဖွေရေး) ကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်း access ကိုဓာတ်ပုံများရပါလိမ့်မယ်။ သင်ပင်သူတို့၏စာရွက်စာတမ်းများစာမျက်နှာများ, နံပါတ်များနှင့် iCloud, အွန်လိုင်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Keynote နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, iCloud ဖို့ဝင်ပေါက်မဆိုအခက်အခဲများတင်ပြခြင်းနှင့်ခေတ်မီ browser ကိုအတူလုနီးပါးမည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သို့သျောလညျး, (သင်အလိုအလြောကျ iCloud Drive သို့လွယ်ကူစွာရှိသည်ဖို့, သင့် PC ကိုမှ iCloud ကနေဓါတ်ပုံတွေကို upload တင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဥပမာများအတွက်) အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်, အောက်ပါနည်းလမ်း - Windows တွင်အသုံးပြုမှု ayklaud များအတွက်တရားဝင် Apple က utility ကို။
Windows အတွက် iCloud
သငျသညျကို Windows 10, Windows 8 နှင့်7မှာပါတဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ် ayklaud သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, Window iCloud များအတွက်အခမဲ့ပရိုဂရမ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် Apple က၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်။
program ကို install လုပ်ပါ (နှင့်ထို့နောက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်) ပြီးနောက်သင်တို့၏နိမိတ်လက္ခဏာသင့် Apple ID နှင့်လိုအပ်ပါကမူလ setting များကိုလိုက်နာပါ။
Settings များ Apply, နှင့် (ညှိ Data) စောင့်ဆိုင်းတချို့အချိန်ဖြုန်း, သင်ဓါတ်ပုံနှင့်စပယ်ယာအကြောင်းအရာ iCloud Drive တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ayklaud နှင့်သူ့ကိုရန်သူတို့ကိုအထဲကကယ်ဖို့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေဓါတ်ပုံနှင့်အခြားဖိုင်တွေထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ဒါဟာအပေါငျးတို့သ functions တွေစတိုးဆိုင်ကသိမ်းပိုက်သည်ကိုအတိအကျအဘယ်သို့သောအကြောင်းအသေးစိတ်စာရင်းဇယားများတွင်တည်နေရာပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရယူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ မှလွဲ. သင့်ကွန်ပျူတာသို့ iCloud ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်။
ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ PC ကိုမှ iCloud ကနေ data အားလုံးကိုကယ်ဖို့ Outlook သို့မဟုတ် iCloud ကနေ e-mail နဲ့ပြက္ခဒိန်များသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုဖတ်နိုင် Apple ရဲ့ website မှာ:
Windows နဲ့ Outlook နဲ့ //support.apple.com/ru-ru/HT204571 များအတွက် iCloud
iCloud //support.apple.com/ru-ru/HT204055 ထံမှသိမ်းဆည်းနေဒေတာတွေကို
Windows အ Start Menu ကိုစာရင်း iCloud အစီအစဉ်များကို install လုပ်ပါပြီးနောက်ကဲ့သို့သောအားလုံးအဓိကအချက်များရှိနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း: မှတ်စုများ, သတိပေးချက်များ, ပြက္ခဒိန်, မေးလ် "ဟုအဆိုပါ iPhone ကိုတွေ့ပါ," နှင့်တူသော, သူတို့ကသက်ဆိုင်ရာအပိုင်းများတွင်ဖွင့်လှစ် icloud.com က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ် ဒါဟာ ayklaud ရိုက်ထည့်ရန်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့။ ဆိုလိုသည်မှာ အီးမေးလ်ရွေးချယ်မှု, သင်က web interface ကိုတစ်ဘရောက်ဇာကနေတဆင့် iCloud မေးလ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
iCloud ကွန်ပျူတာတရားဝင် website တွင်ရှိနိုင်ပါသည် Download: //support.apple.com/ru-ru/HT204283
iCloud installed နှင့်မီဒီယာ Feature ကို Pack ကိုအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြပေးမထားလျှင်, ဤနေရာတွင်ဖြေရှင်းချက်: အ iCloud ကို install တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအမှားသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို fix ဖို့မာလ်တီမီဒီယာ features တချို့ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။
သငျသညျကို Windows ပေါ်တွင် iCloud ထဲက get ပါကအလိုအလျှောက်ယခင်ကက download သိုလှောင်မှုထဲကဒေတာအားလုံးကိုဖျက်။
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်းအတွက် entry ကိုက်ဘ် interface ကိုအတွက် iCloud setting တွင်ခဲ့ရှိရာကို Windows, များအတွက် set ကို iCloud ၏ကြားမှထဲမှာ, ချိတ်ဆက် device ကို Windows နဲ့ကွန်ပျူတာများကိုဖော်ပြရန်တော်မမူကြောင်းထောက်ပြသည်။